China Thermal Analyzer ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အပူပေးစက် > Differential Scanning Calorimeter > အပူစိစစ်ကိရိယာ
အပူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာသည်ပစ္စည်းများ၏အတွင်းအပူကူးပြောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပူချိန်နှင့်အပူစီးဆင်းမှုကြားဆက်စပ်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းတွင်အထူးသဖြင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုများရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရည်များအရည်ပျော်ခြင်း၊ ဖန်အကူးအပြောင်းအပူချိန်၊ ပုံဆောင်ခဲနှင့်အအေးဓာတ်ပုံသွင်းခြင်း၊ အဆင့်ကူးပြောင်းမှု၊ အပူတည်ငြိမ်မှု၊ curing/crosslinking၊ ဓာတ်တိုးသံချေးတက်ခဲသည့်ကာလစသည်။ Jiahang DSC သည်အမျိုးသားအဆင့် GB/T15065-2009, GB/T2951.42-2008, GB/T17391-1998, GB/T19466.6-2009 စံနှင့်အညီဖြစ်သည်။
Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း
Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း measures the relationship between temperature and heat flow related to the internal heat transition of materials. It hasawide range of applications, especially in the research and development, performance testing and quality control of materials. Such as material melting, glass transition temperature, crystallization and cold crystallization, phase transition, thermal stability, curing/crosslinking, oxidation rust lead period and so on. Jiahang DSC in line with the national standard GB/T15065-2009, GB/T2951.42-2008, GB/T17391-1998, GB/T19466.6-2009 standard.
1. Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း Introduction
၁: အသစ်စက်စက်မီးဖိုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပိုကောင်းပြတ်သားမှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အခြေခံတည်ငြိမ်မှုပိုကောင်းခြင်း၊
*၂: ၈.၁ လက်မ LCD touch screen display;
*၃: အပူချိန်အပိုင်းသည်-100â low low အထိနိမ့်သည်။
*၄: အအေးကိုပုံဆောင်ခဲဖြစ်စေရန် Peltier အအေးခန်းနှင့်သုံးနိုင်သည်။
2. Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း Parameter
၀ï½ž ပေါင် ၅၀၀ မီဂါဝပ်
ï¼ ၁၀၀ ~ ၆၀၀â„ ƒ (Peltier အအေးခန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောနိုက်ထရိုဂျင်အရည်အအေးခန်း)
1 ~ 80â„ ƒ/မိနစ်
± ၀.၁â„ ƒ
DSC sensitivity ကို
အပူ၊ အဆက်မပြတ်အပူချိန် (အပြည့်အဝအစီအစဉ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း)
24bit အရောင်၊ ၈.၁ လက်မ LCD touch screen display
စံ USB interface
စံပစ္စည်း (သံဖြူ) နှင့်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်အပူချိန်နှင့် enthalpy တို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ချိန်ညှိနိုင်သည်
TheThermal analyzer သုံးပစ္စည်း is simple and fully automatic. All experimental operations can be completed on the computer.
တူရိယာပြတင်းပေါက်သည်တရုတ်တွင်ပထမဆုံးသော LCD touch screen ဖြစ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချမှု ၀ န်ဆောင်မှုစနစ်၊ ငါးနှစ်အာမခံ။ တူရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ပစ္စည်းများကိုပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်အပိုစက်များကိုအခမဲ့ပေးသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစွာလည်းကျွန်ုပ်တို့၏တူရိယာများကိုသုံးကြသည်။ Liansu ပိုက်များနှင့် Xiongsu ပိုက်များကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်များစွာသည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီများဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစမ်းသပ်နိုင်သောစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိတူရိယာပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအများစုသည်စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသုံးသည်။
Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း hasawide range of applications, especially in the research and development, performance testing and quality control of materials.
၁။ ဤတူရိယာသည်ထုတ်ကုန်၏ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်စွမ်းအားကိုဓာတ်တိုးခြင်းစတင်ခြင်းကာလဟုလည်းခေါ်သည်။ ဓာတ်တိုးမှုစတင်ခြင်းကာလတစ်လျှောက်ထုတ်ကုန်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤအညွှန်းစမ်းသပ်မှုသည်ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဓာတ်တိုးပစ္စည်းထည့်သွင်းမှုကာလကိုကုန်ကြမ်းနှင့်ပြန်ရောစပ်မှုအချိုးကိုထိန်းညှိရန်သုံးနိုင်သည်။ အမျိုးသားအဆင့်သို့ရောက်သောအခါထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၂။ တူရိယာသည်ဖန်ပန်းအပူချိန်၊ အရည်ပျော်မှတ်၊ enthalpy နှင့်ကွဲအက်ခြင်းကိုစမ်းသပ်နိုင်သော DSC စမ်းသပ်မှုကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖန်အကူးအပြောင်းအပူချိန်စစ်ဆေးမှုသည်ရော်ဘာနှင့် epoxy ပစ္စည်းများအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဓာတ်သည်ပုံစံပြောင်းသွားသည့်အပူချိန်ကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများသည်မပြောင်းလဲပါ။ အသုံးပြုသောပစ္စည်းသည်၎င်း၏ဖန်ခွက်အကူးအပြောင်းအပူချိန်ထက်မပိုသင့်ပါ။ အရည်ပျော်အမှတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အရာ ၀ တ္ထုသည်အစိုင်အခဲအခြေအနေမှအရည်ပျော်သောအခြေအနေသို့ပြောင်းသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ပစ္စည်းများသည်အရည်ပျော်ပြီးပိုက်ထဲသို့မ ၀ င်မီထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများသည်ဤအပူချိန်သို့ရောက်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရည်ပျော်မှတ်သည် ၁၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသော်လည်းအချို့သောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်အရည်ပျော်မှတ်အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းမခံရပါ။ အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ၏အပူချိန်ကို ၁၅၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်သို့သတ်မှတ်နိုင်သော်လည်းအပူချိန်မှာ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုမြင့်ပြီးစွမ်းအင်စွန့်ပစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာဓာတ်အားလုံးသည်ကွဲအက်သောအပူချိန်ရှိသည်။ ကွဲအက်သောအခါ၊ ပစ္စည်း၏ဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းသွားသည်။ ထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာများမှသတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်သည်မသိကျိုးကျွံပြုသောအပူချိန်သို့ချဉ်းကပ်လျှင်၊ ထုတ်လုပ်သောပိုက်လိုင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်မတည်မငြိမ် ဖြစ်၍ အရည်အသွေးသည်ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းသည်ထုတ်ကုန်ရောင်း ၀ ယ်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာများကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
5. Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း detail
၁: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ငွေ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီတာ၊ သန့်စင်သောဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ပြီးဒေတာများကိုဒေတာဘေ့စ်တွင်တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်သည်။
2: တူရိယာသည်ဖော်ရွေသော interface နှင့်လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုတို့ဖြင့် two-way control (host control, software control) ကိုချမှတ်နိုင်သည်။
၃: အသစ်စက်စက်မီးဖိုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပိုကောင်းပြတ်သားမှုနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေခံတည်ငြိမ်မှု
JiahangProduct သည် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ TART အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဆော့ဝဲမူပိုင်ခွင့် ၁၀ ခုနှင့်မူပိုင်ခွင့်မျိုးစုံကျော်ကိုရရှိထားသည်။
A:How many years have your company made Thermal analyzer သုံးပစ္စည်း?
မေး။ ။ သိပ္ပံနည်းကျတူရိယာထုတ်လုပ်သူ ၂၂ နှစ်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဖြေရှင်းသူပံ့ပိုးပေးသူ။
မေး။ ။Jiahang သည်တူရိယာတစ်ခုစီတွင်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းများရရှိစေရန်သေချာသော software မူပိုင်ခွင့် ၁၀ ခုနှင့်မူပိုင်ခွင့်များစွာရရှိထားသည်။
မေး။ ။ဟုတ်တယ်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတို့က Arablab, PICCTON, Analytica Russia, Lab Africa, Analytica Germany, Analytica Latin America စသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာကျော်ကြားတဲ့ပြပွဲတွေမှာနှစ်စဉ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်။
A:မင်းကုမ္ပဏီရဲ့ R&D အင်အားကဘယ်လိုလဲ
မေး။ ။ခိုင်မာသော R&D နည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ (ပျမ်းမျှအလုပ်အတွေ့အကြုံ ၈ နှစ်ရှိသောနာမည်ကြီးဒေါက်တာများနှင့်လူ ၂၀ ကျော်ပါ ၀ င်သော R&D အဖွဲ့သည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ) ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာပြဿနာများ
မေး။ ။OEM စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပါ၊ ထုတ်ကုန်တွင်ပါ ၀ င်သော software သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆက်တင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်
A:သင်သည်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ (သို့) ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား။
မေး။ ။၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထုတ်လုပ်သူ၊ ပွဲစားများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများကစျေးနှုန်းကွဲပြားမှုမရှိစေဘဲအရင်းအမြစ်စက်ရုံ၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်အားသာချက်ရှိသည်။ Jiahang သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းတွင်အခြေစိုက်။ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ခွဲ ၁၅ ခုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ၂ ခုရှိသည်။
မေး။ ။"ယေဘုယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပြီး ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်ကြာလိမ့်မည်။ ပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ "
မေး။ ။ငါတို့သည် L/C, TF, Paypal, Western Union စသည်တို့ဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။
မေး။ ။ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကိုပေးနိုင်သည်။ video-ca (သို့) အသံချတ်ဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီပံ့ပိုးမှု
မေး။ ။ပထမဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောမည်သည့် ၀ ယ်သူမဆိုကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်းအစမ်းအခွင့်အလမ်းကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။
တရား ၀ င်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကိုက်ညီသောတရားဝင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအာမခံစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပါ။
hot Tags:: အပူခွဲစက်၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
Differential Scanning Calorimetry တိုင်းတာသည်
DSC အပူ Analyzer